Vovon-tsakafo roan-taolana (303-42-4) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Ny hafa / Methenolone enanthate powder
SKU: 303-42-4. Sokajy: Ny hafa
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra azo avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny metenolone Enanthate (303-42-4), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Vidin-drivotra metenolone enanthate
Vovon-tsakafo roan-taolana fototra Characters
Name: Vovonan'aretin-tavoahangy metenolone
Meny fitetezana 414.62100
Rano Methenolone Enanthate ny fampiasana vovoka amin'ny tsingerim-pandaminana
Ny vovonan'aretina môtènolone (CAS 303-42-4) dia matetika antsoina hoe Primonabol Depot, Primo E, Primo Enathate.
Fampiasana metenolone enanthate / Primonabol Usage
Ny fampiasana solifara môtônôlône matetika ampiasaina amin'ny fampiasana entona.
Ho an'ny lahy dia raiso matetika ny 100-200mg isan-kerinandro, arakaraka ny toe-tenanao, 200-300mg; 300-400mg dia ok.At amin'ny ankamaroan'ny 600mg, tsy mihoatra ny 8-12 herinandro, Ho an'ny vehivavy, matetika 50-100mg isan-kerinandro. Ary mihoatra ny herinandro 4-6,
Na dia steroid aza izy io, dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny volo-tsain'ny Methenolone Enanthate (CAS 303-42-4):
fanehoan-kevitra matanjaka sy mifanohitra amin'ny androgenic. Ny voka-dratsin'ny androgeno dia miteraka fihenam-bidy, mihamitombo ny volo eo amin'ny toeran'ny lahy sy ny vavy ary ny fitomboan'ny volo eo amin'ny vatana. Ampitomboy ny volo, ny fitomboan'ny volo eo amin'ny vatana, ny fiharatsian'ny vehivavy (azo amboarina amin'ny faritra maro amin'ny fitomboan'ny vatana, ny lalina sy ny fielezan'ny clitoris) dia mampitombo avo lenta ny tsindry aloka, toy ny fampitomboana na ny fihenan'ny kolesterola LDL, manakana ny famokarana testosterone voajanahary, ny adin-tsakafo, ny toetry ny atidoha.
Vokatry ny mônônôlônina manala vovoka mena Torolalana fanampiny
Ao anatin'ilay sehatry ny fitsaboana, ny môtô dia môtônônatomine enanthate dia ampiasaina mba hikarakarana ireo olona mijaly amin'ny toe-piainana izay mihintsana ny fihinan'ny vozona sy ny fatiantoka mavesatra. Ny fampiasana hafa dia ny: ny fiovaovan'ny tosi-drà ho an'ny olona tsirairay miady amin'ny aretina, ny fandaniana ny fepetra, ny fanoherana ny vokatra ny fitsaboana kortikosteroid efa ela, ary ny fitsaboana ny osteoporose sy ny sarcopenia (ny faharetan'ny hozatra mifandray amin'ny fahanterana). Mampihena ny vovony mena, toa an'i Anavar, izay hita fa malemy amin'ny fiantraikany ratsy amin'ny fampiasana zaza sy zaza koa mba hampiroboroboana ny fahavoazana amin'ny zaza vao teraka tsy misy fampidiran-tsakafo na toaka [3 ]. Ny olona dia afaka mahita tsara hoe aiza no ahazoan'ny fitsaboana anabolic anabolika avy amin'ny fiarahamonina atletika sy birao, Ny fahafaha-manatsara ny môtônôlônera Enanthate manatsara ny fiarovana ny hery fiarovana dia mety ho tena mahasoa ny mpampiasa steroid isan'andro. Raha matanjaka ny hery fiarovanao, dia ho salama kokoa ianao ary hanana fotoana mora kokoa hahatratra ny tanjonao.
Meny fitetezana Fitaovana mothenolone (CAS 303-42-4)
Ahoana ny hividianana vinaingitra metenolone enanthate (CAS 303-42-4) avy amin'ny AASraw
AASraw manome ny fahadiovana 99% Methenolone Enanthate volo volo ho an'ny mpanao biriky na laboratoara ambanin'ny tany ho fampidirana / oral fampiasana.
Inona no atao hoe vovoka metenolone?
Vovon-tany vinaingitra metenolone: ​​4 zavatra azo ampiasaina
Vovonan'ny vinaingitra metenolone mividy: 4 zavatra hampiasaina tsara Primo!
Buy Methenolone Enanthate powder: do not buy it before you know these !!!